रेड क्वीन, एन्टोनिया स्कट को रोमांचक एक विन्डो | वर्तमान साहित्य
रातो रानी स्प्यानिश जुआन गोमेज-जुराडो द्वारा लिखित थ्रिलर हो। यो पुस्तक नोभेम्बर २०१ in मा प्रकाशित भएको थियो र यो त्रिकोणको पहिलो किस्त हो जुन एन्टोनिया स्कटको रोमांचक घटनाहरूको वर्णन गर्दछ। उनी अद्भुत बुद्धिमत्ताको साथ एक रमाईलो महिला हुन् जसले पुलिस बिना नै धेरै अपराधहरू समाधान गरेकी छिन्। यद्यपि, केहि परिस्थितिले उनलाई पूर्ण पृथक जीवन अपनाएको छ।
एन्टोनियाको गोप्यताले पुलिस अफिसर जोन गुटियरेजको हस्तक्षेपका लागि धन्यवाद बदल्छ, जसले उनीसँगै अनुसन्धान गर्न उनलाई कैदखानाबाट बाहिर निकाल्छ। यो कसरी एउटा अविश्वसनीय र रहस्यमय कहानी म्याड्रिड शहर भर फैलियो। यसैले, रातो रानी यसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसको लेखकलाई २ 250.000०,००० भन्दा बढी प्रतिहरू बिक्रि गरी समर्पण गरेको छ।
1 लेखकको बारेमा, जुआन गोमेज-जुराडो
1.1 साहित्य जीवन र प्रशंसा
1.2 स्टारडममा जानुहोस्
1.3 बच्चाहरू र युवा पुस्तकहरू
1.3.1 बच्चाहरूको कामहरू
1.4 मिडिया रोजगार
2 रातो रानी विश्लेषण
2.1 रातो रानी
2.2 एन्टोनिया स्कट
2.3 जोन गुटेरेज
2.4 पहिलो जाँच
2.6 खोजी सुरु हुन्छ
लेखकको बारेमा, जुआन गोमेज-जुराडो
शुक्रवार, डिसेम्बर १,, १ 16 .1977 मा, उहाँ म्याड्रिडमा जन्मनुभयो जुआन गोमेज-जुराडो। उनले सूचना विज्ञानमा स्नातक डिग्री सीईयू सान पाब्लो विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गरे। बराबरी, स्पेनी मिडियामा पत्रकारको रूपमा क्यारियर बनाएको छ नहर +, रेडियो स्पेन, ABC, COPE स्ट्रिंग र म्यागजिनहरूमा भाग लिए के पढ्ने, न्यू योर्क टाइम्स पुस्तक समीक्षा र जट डाउन।
साहित्य जीवन र प्रशंसा
गोमेज-जुराडो थ्रिलर विधामा उत्कृष्ट लेखक हुन्, उनको पहिलो कामहरू थिए: भगवानको जासूस (2006), भगवान संग सम्झौता (2007) र गद्दारको प्रतीक (२०० 2008) यो अन्तिम कार्य - एक सही कहानीबाट प्रेरित र नाजी जर्मनीमा सेट - लाई योग्य थियो Torrevieja उपन्यास पुरस्कार को शहर.
Year बर्षको अन्तराल पछि, लेखकले आफ्नो काम जारी राख्यो उपन्यास संग: चोरको कथा (2012), बिरामी (2014), श्री व्हाइटको गोप्य इतिहास (2015) र Scar (2015)। यो अन्तिम पुस्तक, जस्तै गद्दारको प्रतीक, सबै भन्दा राम्रो विक्रेता बीच थियो भित्र डिजिटल ढाँचामा २०११ र २०१ during मा अमेजन प्लेटफर्म।
२०१ 2018 मा, गेमेज-जुराडोले थ्रिलर प्रस्तुत गरे रातो रानी एन्टोनिया स्कटको त्रिकोण शुरू गर्न, एक मूल चरित्र जसले सयौं पाठकहरूलाई समातेको छ। वितरण कालो ब्वाँसो (2019) र सेतो राजा (२०२०) ले योको सफलतालाई निरन्तरता दियो। यस श्रृंखलाले लेखकलाई १,२००,००० भन्दा बढि बेस्टसेलर बनायो आफ्ना पाठकहरू द्वारा प्राप्त प्रतिलिपिहरू, विधाको महान प्रतिपादकहरू मध्ये एकको रूपमा आफूलाई गुणाई।
बच्चाहरू र युवा पुस्तकहरू
बाट 2016, जुआन गोमेज-जुराडो मा चकित बाल साहित्यविशेष गरी को विधामा साहसिक र रहस्य। उनले दुई श्रृंखलाका साथ आफ्नो काम सुरू गरे: एलेक्स कोल्ट y Rexcatadores। पछिबाट, लेखक बाल मनोवैज्ञानिक बरबारा मोन्टेजसँग लेखकत्व साझा गर्दछन्।
यी बच्चाहरूको पाठको चित्रण फ्रान्क फेरिजले बनाए। २०२१ मा, गोमेज-जुराडो मोन्टेसको साथ एक नयाँ श्रृंखला सुरु हुन्छ जुन किशोर आमन्डा ब्ल्याकको कथा बताउँदछ। त्यो पहिलो प्रतिलिपि नाम छ एक खतरनाक सम्पदा।
एलेक्स कोल्ट श्रृंखला:
स्पेस क्याडेट (2016)।
Ganymede को युद्ध (2017)।
जार्कको रहस्य (2018)।
गाढा पदार्थ (2019)।
अन्टारेसको सम्राट (2020)।
एक खतरनाक सम्पदा (2021)।
अडियोभिजुअल मिडियामा उनको क्यारियरमा, लगातार years बर्ष सम्म उनीहरुको सहभागिता हाइलाइट गर्दछ (२०१-2014-२०१)) स्पेनिश रेडियो स्टेशनमा ओडाडा सीरो। त्यहाँ, राकेल मार्टोससँगै, उनले पत्रिकाको "व्यक्तित्व" खण्ड प्रस्तुत गरे जुलिया राम्रो छ। २०१ 2017 मा, आर्टुरो गोन्जालेजसँगै, उनले कार्यक्रम सञ्चालन गरे: सिनेमास्कोपाजो, जुन मार्फत प्रसारित गरिएको थियो YouTube.
त्यस्तै, उसले पोडकास्टि ofको संसारमा दुईवटा सांस्कृतिक परियोजनाहरूसँग कदम चालेको छ: सर्वशक्तिमान y यहाँ ड्र्यागनहरू छन्। दुबैमा, उनले शुरुदेखि अहिलेसम्म रोड्रिगो कोर्टेस, आर्टुरो गोन्जालेज-क्याम्पोस र जेभियर क्यानसाडोसँग माइक्रोफोन साझा गरेका छन्। २०२१ मा, उसले टेलिभिजन प्रस्तुतकर्ताको रूपमा सुरू गर्यो फ्लक्स क्यापेसिटर, च्यानल कार्यक्रम मा ईतिहास2de TVE।
विश्लेषण रातो रानी
रातो रानी म्याड्रिड मा सेट एक अपराध उपन्यास होजहाँ अपहरणको समाधान हुँदा ठूलो भावनाहरू अनुभव हुन्छन्। कथानकमा एन्टोनिया र जोनले अनुसन्धानमा फोर्सलाई साथ दिए स्प्यानिश उच्च समाजका दुई परिवारसँग सम्बन्धित केहि केसहरू। प्रत्येक कथा लाइन ताजा तरीकामा प्रस्तुत गरिएको छ, सरल संवाद र छोटो अध्यायको साथ तुरून्त पाठकलाई समात।
रातो रानी (प्लट)
रेड क्वीन एक यूरोपीय परियोजना हो जुन आपराधिक अनुसन्धानको लागि समर्पित छ, पूर्ण विवेकासहित र कानून बाहिरको विशेष केसहरू समाधान गर्न सिर्जना गरिएको थियो। यो गोप्य इकाईको ठूलो प्रतिष्ठा छ, र युरोपभरि पुलिस समूहसँग मिलेर उनीहरूको कामको प्रबन्ध गर्दछ, एन्टोनिया स्कट उस संगठनको एक हिस्सा हो।
एन्टोनिया, एक प्रतिभाशाली महिला, २ बर्ष पहिले उनी आफ्नो कामबाट टाढा छिन् र वास्तविक संसार। यो अवस्था गम्भीर उदासीनताको कारण हो उनको लागी दोषको भावनाबाट प्रेरित, मार्कोस-को पति को दुर्घटना पछि- जो अस्पतालमा कोमामा छन्।
इन्स्पेक्टर गुटियरेज ili० बर्ष भन्दा बढी समयका लागि मेहनती प्रहरी अधिकारी हुन् - समलि .्गी- ऊ मूलतः बास्क कन्ट्रीका हो, कडा शरीरका साथ वजन उठाउनको लागि आफ्नो शौकको कारण; थप रूपमा, उनीसँग हास्यको राम्रो भावना छ। जेन इमानदार प्रहरी अधिकारी भए पनि, उहाँ हालका लागि आफ्नो पदबाट निलम्बित हुनुहुन्छ कथित रूपमा संलग्न अवैध कार्यहरू।
सुरुमा, एन्टोनिया र जोनले यो हत्याको पछाडि के छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्छ - प्रख्यात स्पेनिश बैंकका निर्देशकको छोरो एल्वारो ट्रुबा। युवा उत्तराधिकारी धेरै दिनसम्म हराइरहेको थियो र पछि म्याड्रिडको एक विशेष शहरीकरणमा मृत भेटियो। अन्टोनिया र जोनले अनुसन्धानको बारेमा अनुसन्धान गरे पछि उनीहरू अर्का धनी युवतीको अपहरणमा अवरुद्ध भए।
कथामा कार्लाको अपहरण प्रस्तुत गरिएको छ, जो एक गैलिशियन व्यापारी रामन अर्टिजकी छोरी हो। संसारको सब भन्दा धनी मानिस मानिन्छ। कार्ला आफ्नो परिवार र कपडाको कम्पनीमा शरण लिन्छिन्, आफ्नो बुबा र सौतेनी बहिनीसँग राम्रो सम्बन्ध नबनाए पछि। अनुसन्धानको विकास भइरहेको बेलामा उसको व्यक्तिगत जीवनको बारेमा खुलाइनेछ जसले केसको लागि मूल्यवान सुराग प्रदान गर्दछ।
खोजी सुरु हुन्छ
जोन गुटिरिज एक जासूस हुन् जसले एक निर्दोष क्यारियरको बाबजुद हालसालै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको छ। यस प्रक्रियामा, गुटियरेज एक रहस्यमय व्यक्तिले सम्पर्क गरे, जसले एक मिशनको प्रस्ताव गर्दछ: एन्टोनिया स्कटको खोजी गर्न र उनको कैदबाट बाहिर निकाल्नुहोस्। बदलामा, उसले तपाईंलाई आफ्नो क्यारियर सफा गर्न मद्दत गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछ।
प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि, इन्स्पेक्टरले अन्टोनियाको निवास स्थान लाभापिसको यात्रा सुरु गर्छन्। त्यहाँ उनले सँगै काम गर्न उनलाई मनाउनुपर्दछ, यस्तो काम जुन सजिलो हुँदैन, किनकि उनी गहिरो शोकमा डुबेकी छिन्। गडबडीको बाबजुद, जोन उनलाई मनाउन सफल हुन्छन्; र ट्रुबाको केस ल्याएर उसले आफ्नो पुलिस प्रवृत्ति जगाउँछ।
मुद्दाको अनुसन्धानको रूपमा प्रगति, एन्टोनिया र जोन बीचको सम्बन्ध धेरै चरणहरु मा जान्छ, किनभने तिनीहरूसँग बिभिन्न व्यक्तित्वहरू छन्, तर त्यो अन्त एक अर्को पूरक हो। त्यस्तै, अनुसन्धान रहस्य र कठिनाइहरूले भरिएको हुनेछ, जसमा पीडितको प्रोफाइल मिल्दछ र यसले अज्ञातलाई खडा गर्छ, के उही अपराधी हुनेछ?
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कालो उपन्यास » रातो रानी